धनुषामा कलिया - गृह हेरविचार
कोला एरोडको परिवारको सबै भन्दा सुन्दर रंगहरु मध्ये एक हो, घरहरु र अपार्टमेन्टहरु को स्थिति मा बढेको छ। प्रकृतिमा, त्यहाँ धेरै प्रकारका कलहरू छन्, जुन आकारमा मात्र होइन तर प्रवर्द्धन को छायाहरुमा समेत, साथै रूट प्रणालीको प्रकारमा भिन्न हुन्छन्। पछि घर मा बर्तन मा कोला को हेरविचार को निर्धारण गर्दछ।
एक बर्तन मा बढ्दै कोला: प्रजनन र प्रत्यारोपण
बिरुवाको प्रजननमा ताजमको प्रकारमा निर्भर हुन्छ। यहाँ नयाँ तरिकाहरू प्राप्त गर्न तीन तरिकाहरू छन्:
रजाइम प्रणाली, सेतो कल्याणको विशेषता, भागमा विभाजित हुनु पर्दछ। सेक्शनहरू सुकेको हुनुपर्छ, कोइराला संग पाउडर वा हरीरीसँग असिष्ट।
रंगीन बेडड्रेडको विशेषता, तिलर मातृ प्रणाली, नोडलहरूमा विभाजित हुन्छ, जसको प्रत्येकमा कम से कम एक गुर्दे हुनु पर्छ।
बीउ द्वारा पुनरुत्थान एक अपरिचित शौकिया को लागि एक जटिल प्रक्रिया हो।
विभाजन बाँकी अवधिको अन्त्य पछि वसन्तमा उत्पादन गरिन्छ। जो कोला को लागि कुन बर्तन को आवश्यकता छ मा रुचि छ, यो भन्यो कि यो कम से कम 15 सेमी व्यास संग चौडा हुनुपर्छ, तर धेरै गहिरो छैन। तलमा सधैँ5सेन्टिमिटर मोटाईको डिलिजन राख्नु पर्छ। बत्तीको कलियाका लागि माटो सार्वभौमिक हुन सक्छ, यदि यो रिजम किस्मको प्रश्न हो। टबहरूले 1: 2: 1: 0.5 को अनुपातमा पात र टर्फ मैदान, हास्य र मोटे रेतको मिश्रण गर्न आवश्यक छ। गहिराइ गर्नु भन्दा तिब्बतहरु लाई पोटेशियम परमुनिट को कमजोर समाधान मा राखयो वा कवक को उपचार संग उपचार गरिन्छ। सेतो फूलहरूको रिजमोनले ती दूरीमा घुमाउँछ जुन तिनीहरूको तीनवटा तह बराबर छ। रोपण स्प्रे बन्दूकबाट स्प्रे गरिएको छ, र 14 दिन मुर्दाहरू देखा पर्न पछि, तिनीहरू सक्रिय रूपमा पानी पकाए र खाना खान्छ।
एक बर्तन मा केल्ला को हेरविचार गर्ने?
यहाँका सर्तहरू छन् जुन बिरुवाले राम्ररी विकास गर्नेछ, बढ्छ र प्रचुर फूलको आनन्द उठाउँछ।
उज्ज्वल बिखरेको प्रकाशको असर 10-12 घण्टा लामो। चिसो सिजनमा अतिरिक्त प्रकाश प्रदान गर्न आवश्यक छ।
गर्मीमा रोइजोम बिरुवाहरूको लागि हावाको तापमान 17-21 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ, र चिसो मौसममा कम्तिमा 2-3 महिनाको लागि तापमानमा 10-13 डिग्री सी। रंग कल्याण बढ्दो मौसमको तापमान + 20-24 डिग्री सेल्सियसमा राम्रो लाग्छ, र बाकी समयमा यो + 25-28 डिग्री सेल्सियससम्म बढेको छ, जो तौलियाहरू पोषण गर्न आवश्यक छ।
सेतो कल्याणका लागि हावाको आर्द्रता 70-80% हो, र रङका लागि यो अधिक उदार हुन सक्छ - 50-60%।
एक बर्तन मा सर्दी कोला
पहिले नै भनिएको छ, आराम अवधि सुरक्षित गर्दै कल्याण बढ्नको लागी एक आवश्यक अवस्था हो, र यदि देखा पर्यो भने उनीहरूले बोसो हुन सक्दैनन्। अर्नकस हाइबिर्नेशनमा खसेको छ, पानीलाई छोटो पार्नु र ठुलो ठाउँमा बर्तन हटाउनु आवश्यक छ। बाँकी अवधिको लागि तयारीको मुख्य चिन्ह सबै पत्तिहरु बाट निस्कने र मरिरहेको छ, तर यो केवल कलर किसिमहरुमा लागू हुन्छ, किनकी सेतो कल्याणले पत्ते गर्दैन।
खेती र हेरचाहको अन्य नग्नता
कल्याणमा पानीको लागि विभिन्न आवश्यकताहरू पनि छन्। त्यसोभए, "रंगीन" नमीको साथमा नरम मात्रामा समृद्ध हुन्छ, किनकि माटोमा यसको ठहराव तिनीहरूको लागि विनाशकारी हुन सक्छ। पछिको सिंचाई मात्र गरिन्छ यदि माटोको माथिल्लो तह 2-3 सेन्टीमिटरको गहिरो घाम्छ। उस्तै सेतो फूलहरू प्रचुर मात्रामा पानी र बत्तीमा लगातार मिट्टीको नमीको विरुद्ध होइन। जब सम्म रोपण बाँकी अवधि छोड्न्छ, यो कार्बन र खनिज उर्वरहरू बदल्नु, हरेक दुई हप्तामा उकालो हुन्छ। फ्लोर शीर्ष ड्रेसिङ निकालेर, यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तरल प्रवर्द्धन मा पाउँदैन, अन्यथा उनि आफ्नो सजावट को गुमाउन सक्छ।
यो सम्झना छ कि अनुचित हेरविचार संग, बिरुवाहरु, कडा र अन्य रोगहरु मा आक्रमण गर्न सक्छ। र यो समय माटो मा परिवर्तन को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यो समय समाप्त भएको छ र यसको पोषक तत्व हराउँछ।
अंकहरू - बढ्दै बाहिर
एंथेरियम ब्ल्लो कसरी गर्ने?
जाडोको लागि रास्पबेरीहरू कसरी राख्ने?
बगैचाको लागि भेडाहरू
Spireles - प्रजाति र किस्महरू
कसरी तातो हटाउने?
बिरुवाहरूका लागि प्रकाश
लवेंडर - रोपण र खुल्ला मैदानमा हेरचाह गर्नुहोस्
रोप्नु अघि आलुटोटोथोबाट आलु कसरी उपचार गर्ने?
म कति फूलहरु घरमा बस्न सक्छु?
घर मा मरिच बिरुवाको शीर्ष ड्रेसिङ - कसरी स्वस्थ बिरुवाको विकास गर्ने?
पहिलो तूफान संकेत हो
सूखे फलको एक टुक्रा राम्रो वा खराब छ?
Socle को लागि प्लास्टिक पैनलों
ब्यागेर पियरे कार्डिन
कलर बिना कोट मा एक स्प्रिंग कसरी टाई गर्ने?
तपाईं किन रोइरहनु भएको जस्तो लाग्दैन?
कस्मेटोलोजी मा डार्सोनलवल
बिरुवाको लागि ओवन पृथ्वीमा कसरी घुमाउनुहुन्छ?
स्ट्रोक - लक्षणहरू, पहिलो संकेतहरू
मासुदार मासु संग क्यूजियडाला
आफ्नो हातले दाचा मा तालाब
बाँया दुर्व्यवहार सिस्ट
के गर्भवती भएपछि गर्भवती हुन सक्छु?
टम हार्डी र तिनकी पत्नीले चमत्कारको आशामा
विवाहको फोटो शूटको लागी सहायक उपकरण
तपाई किन आफ्नो आँखालाई पछाडि राख्नुहुन्छ?
रासस्टेय माछा संग
दौडका लागि मोजेहरू